काठमाडौंमा खुल्यो उफ्रिँदै-उफ्रिँदै रमाइलो गर्न सकिने ठाउँ (भिडिओ) :: मन्दिरा घिमिरे :: Setopati
काठमाडौंमा खुल्यो उफ्रिँदै-उफ्रिँदै रमाइलो गर्न सकिने ठाउँ (भिडिओ)
यहाँ उफ्रिँदै बास्केटबल खेल्नदेखि रक क्लाइम्बिङसम्म गर्न सकिन्छ
सुसन चौधरी काठमाडौं, वैशाख १
जम्प केटिएममा। तस्बिरः सुसन चौधरी/सेतोपाटी
मान्छेहरू स्वभावअनुसार विभिन्न तरिकामा मनोरञ्जन लिन्छन्- कोही फिल्म हेरेर, कोही किताब पढेर त कोही प्रकृतिमा रमाएर। कसैलाई एकान्तमा बसेरै रमाइलो लाग्ला। अनि कोहीकोही मनोरञ्जन दिने खेल भनेपछि हुरूक्कै हुन सक्छन्।
आज यस्तै मनोरञ्जन दिने खेलको कुरा गर्नेछौं जुन नेपालमा नयाँ हो भन्दा फरक पर्दैन।
खेल हो- ट्राम्पोलिन जम्प।
विदेशमा खुबै चल्तीमा रहेको यो खेल विशेष किसिमको लचकदार प्लास्टिकमा उफ्रेर खेलिन्छ। केटाकेटीदेखि शरीरले साथ दिएसम्म सबैले खेल्न मिल्ने यो खेलमा खुब शारीरिक व्यायाम पनि हुन्छ।
यो खेल खेलाउने ठाउँलाई सामान्य भाषामा ट्राम्पोलिन पार्क भनिन्छ। यस्तै पार्क केही महिनाअघि काठमाडौंको मण्डिखटारमा खुलेको छ।
फरक किसिमको मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले 'जम्प केटिएम' नाममा खुलेको यो नेपालको पहिलो इनडोर ट्राम्पोलिन पार्क भएको सञ्चालक जिग्मे वाङचुक शेर्पाको दाबी छ।
'यहाँ उफ्रिएर मात्रै भरपुर मज्जा लिन सकिन्छ,' केटिएम जम्पका सञ्चालक शेर्पाले भने, 'यस्तो किसिमको इनडोर ट्राम्पोलिन पार्क नेपालमै पहिलो हो।'
इनडोर ट्राम्पोलिन पार्क भन्नाले भवनभित्र भएको हो।
शेर्पालाई काठमाडौंमा नयाँ मानिने यो खेल भित्र्याउने आइडिया कसरी आयो त?
झन्डै चार वर्षअघिको कुरा हो। शेर्पा पढाइको सिलसिलामा युरोप पुगेका थिए। उनी पढेको विश्वविद्यालयमा आउटडोर ट्राम्पोलिन पार्क थिए। युरोपका विभिन्न देश घुम्दै जाँदा उनले बेग्लै खालका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू देखे।
'नेपालमा आम जनमानसमा मनोरञ्जन क्षेत्र भनेर पार्क र फिल्म हल मात्र दिमागमा आउँछ। मलाई नेपाल फर्केर मनोरञ्जन क्षेत्रमा युरोपमा देखेजस्तै नयाँ नयाँ खेल सुरू गर्ने हुटहुटी जाग्यो,' उनले भने।
नयाँ खेल त ल्याउने तर के? उनी अलमलमै थिए। पछि थाइल्यान्ड जाँदा त्यहाँ पनि उनले मान्छेमा ट्राम्पोलिन पार्कप्रतिको मोह देखे। अनि भने उनलाई ट्राम्पोलिनसम्बन्धी नै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो।
त्यही अवधारणालाई नेपाल ल्याएर काम गर्न सुरू गरे। नेपालमा यससम्बन्धी खास काम नभएकाले कसरी के के गर्ने भन्ने उनलाई थाहा भएन। काम अगाडि बढाउन विशेषज्ञ चाहिन्थ्यो।
'नेपालमा विशेषज्ञ नभएका कारण हामीलाई काम गर्न कठिन भयो,' शेर्पाले भने, 'त्यसैले हामीले विदेशबाटै विशेषज्ञ बोलाएर काम गर्नुपर्‍यो। लागत पनि बढ्यो।'
शेर्पाका अनुसार जम्प केटिएममा करिब आठ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ। २२ जना कर्मचारीले यसको व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन्।
यहाँ प्रयोग गरिएका ट्राम्पोलिन चीनबाट ल्याइएका हुन्। सन् २०२० जनवरी ७ देखि सञ्चालनमा आएको जम्प केटिएममा मानिसहरूले उफ्रिएर मनोरञ्जन लिन सक्छन्।
मनोरञ्जन लिनका निम्ति सात वटा क्षेत्रहरू छुट्याइएको छ। हरेक ट्राम्पोलिनभित्र एक जना मात्र उफ्रिन सक्छन्।
फ्री जम्प एरिया, स्याल्म डंक एरेना, डजबल एरिया, फोम पिट, प्रोफेसनल ट्राम्पोलिन, एयर ब्याग र टोडलर जोन अथात् बच्चाहरूको क्षेत्र छ। टोडलरबाहेक अरू क्षेत्र वयस्कका लागि हो। टोडलर क्षेत्रमा साढे तीन फिटभन्दा कम उचाइका केटाकेटीले खेल्न पाउँछन्। तर बच्चासँगै एक जना अभिभावकलाई पनि प्रवेश गर्ने दिइने जम्पका प्रशिक्षक सम्पूर्ण लामाले जानकारी दिए।
यो क्षेत्रमा बच्चाहरूले मनोरञ्जनका लिनुका साथै सिक्न समेत सक्ने उनी बताउँछन्। आफैं लडेर उठ्ने, भिन्न रङका बलहरू भित्तामा छिराउने जस्ता विभिन्न गतिविधिले सिकाइको काम गर्ने उनले बताए।
फ्री जम्प एरियामा बाह्र वटा र स्याल्म डंक एरेनामा दुइटा ट्राम्पोलिन छन्। यहाँ विशेषगरी उफ्रिँदै बल जालीमा हालेर स्कोर गरिन्छ, बास्केटबल खेल जस्तै।
डजबल एरियामा खेल्ने तरिका अलि बेग्लै छ। प्रशिक्षक लामाका अनुसार यसमा एक टिमले अर्को टिमका सदस्यलाई बलले हिर्काउनु पर्ने हुन्छ।
'निलो र गुलाबी रङका तीन-तीन वटा ट्राम्पोलिन छन्,' लामाले भने, 'तीन-तीन जनाको नीलो र गुलाबी टिम हुन्छ। दुइटा बल लिएर एक अर्को टिमलाई बलले हिर्काउँछन्। तर बल बाउन्स भएर र कुमभन्दा माथि अर्थात् टाउकोमा लाग्यो भने अंक आउँदैन। बलले सिधै शरीरमा लाग्यो भने मात्र मान्य हुन्छ। बल सिधै समात्यो भने आउट हुन्छ। यसरी नै खेल अघि बढिरहन्छ।'
ब्याक ड्रपमा भने भिरालो ट्राम्पोलिनमा हाम फालिन्छ। ढाड ट्राम्पोलिनमा पर्ने हाम फाल्नुपर्छ जसबाट शरीर राम्ररी उफ्रिएर खेल रमाइलो हुने लामाले बताए।
एयर ब्याग एरियामा स-साना हावा भरिएका बेलुनजस्ता झोला हुन्छन्। यिनमा मानिसहरू फुक्काफाल भएर ढल्न सक्छन्। लामाका अनुसार यसमा ढल्न दुइटा अलगअलग उचाइका स्थान बनाइएको छ। मानिसहरूले आफूले चाहेअनुसार एउटा उचाइमा गएर हाम फालेर रमाइलो गर्न सक्छन्।
यसैगरी फोम पिटमा पहेँलो र गुलाबी रङका ठूला बर्गाकार फोम (डलफ) राखिएका छन्। ट्राम्पोलिनबाट उफ्रिएर फोम पिटमा हाम फाल्न सकिन्छ।
प्रशिक्षक लामाका अनुसार प्रोफेसनल ट्राम्पोलिनलाई हाइ पफर्मेन्स एरिया पनि भनिन्छ। अनुभवी मानिसहरू यस क्षेत्रमा 'स्टन्ट' गर्छन्। यो ट्राम्पोलिन अरूभन्दा बढी उफ्रार्न सक्ने खालको भएकाले धेरैले यसलाई रूचाएका उनले बताए। तर नजानीकन विभिन्न गतिविधि गर्दा चोटपटक लाग्न सक्ने हुँदा प्रयास नगर्न उनी सुझाउँछन्।
'सबै मानिस ट्राम्पोलिनमा विभिन्न गतिविधि गर्न रूचाउँछन्,' लामाले भने, 'तर नजानेको गतिविधि गर्नु हुँदैन। त्यसैले कसले कति जानेको छ, त्यसकै आधारमा सिकाउँछौं।'
जम्प केटिएममा क्याफे पनि छ। कोही अभिभावकले बच्चालाई खेल्न पठाएर आफू यसै बस्न चाहेमा बाल्कोनी क्याफेमा बसेर हेर्न सक्छन्। खेल्दाखेल्दै भोकाएकाले गएर खान सक्छन्।
हाँस्न, उफ्रिन र रमाइलो गर्ने गन्तव्यका रूपमा विस्तार भइरहेको जम्प केटिएममा अधिकांश मानिस सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर आउने गरेको प्रबन्ध निर्देशक आशुतोष न्यौपानेले बताए।
'यहाँ आउनेहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडिओ राख्नुहुन्छ,' उनले भने, 'तिनै देखेर अरू मानिस आउनुहुन्छ।'
यहाँ खेल्न अनिवार्य रूपमा ग्रिप मोजा किन्नुपर्छ। यो मोजामा भएको ग्रिपले ट्राम्पोलिनमा चिप्लनबाट बचाउने प्रशिक्षक लामा बताउँछन्। यो मोजा यही खेलका लागि भनेर चीनबाट ल्याइएको हो।
जम्प केटिएममा खेल्न बच्चाहरूका लागि पाँच सय रूपैयाँ पर्छ भने वयस्कका लागि आठ सय रूपैयाँ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा भने बच्चाको सात सय र ठूलालाई एक हजार रूपैयाँ तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १, २०७९, ०६:१४:००